Isiteshi Senkonzo se-LPG EGO - Messina
Kuvaliwe: NgoMgqibelo ntambama
07:00-13:00 / 14:30-19:30
Isikhungo Senkonzo se-LPG "EGO" - Messina
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-22)
Isiteshi Senkonzo se-Ego e Via San Ranieri a Messina isitshalo izinyathelo ezimbalwa ukusuka enkabeni lapho ungathelela khona I-GPL. Ngaphezu kwe I-LPG Auto, EGO itholakala kumakhasimende uphethiloli, udizili, izithambisi nezimoto.
Isikhungo Senkonzo se-LPG EGO eMessina - Ukuphonswa kwetshe kusuka esikhungweni
La Isiteshi Senkonzo se-EGO yisisombululo esisebenzayo kulabo okudingeka basigcwalise I-GPL njengoba kusondele kakhulu enkabeni ye Messina. Iphuzu lokwenza amandla I-LPG Auto EGO, futhi eyamukela imali okufanele idonswe kanye namakhadi wesikweletu, Itholakala eduzane nomdlula oxhumanisa i-Via La Farina, ekuxhumaneni neVia T. Cannizzaro, endaweni eyi-falcata, imizuzu nje emihlanu ukusuka ePiazza Cairoli. Inzuzo ukuthi awusaphoqwa ukuba uhambe ukuze uzivuselele I-GPL, kulula kakhulu ikakhulukazi uma uhlale womile futhi ukugwema I-LPG Auto ushiya umgwaqo.
Isikhungo Senkonzo se-LPG EGO eMessina - Refueling wonke umuntu
La Isiteshi Senkonzo se-EGO e Via San Ranieri a Messina ayifanele kuphela I-GLP Auto kepha futhi nasezimotweni zikaphethiloli nezidizili. Indawo I-GPL okungeziwe kulokhu okukhona Isiteshi Senkonzo se-EGO di Messina ukuhlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende ayo, ngisho nalezo ezinayo I-LPG Auto futhi kuvame ukujeziswa ngenxa yokushoda kwamaphoyinti okuhambisa I-GPL eZone. Noma yisiphi isidingo, gxuma ungene ku Isitetjhi somsebenzi se-Ego eMessina, lapho uzothola khona uphethiloli ofanele wemoto yakho, noma ngabe kunjalo I-LPG Auto womabili umshini wendabuko futhi uzonikezwa abasebenzi abachwepheshe.
Ikheli: I-Via San Rainieri (Eduze neDon Blasco Park)
I-POSTAL CODE: 98120
Ucingo: 090 6409809
Inombolo ye-VAT: 02877910832